I-Swedish uhlelo yasebhange | Apg29
I-Swedish uhlelo yasebhange
Ingxenye ezintathu zencwadi ethi cashless itulo Cash kuphela.
I Riksbank isebenza ngaso sonke isikhathi, naphezu "ukuma kokungathathi-hlangothi" umsolwa ukusetshenziswa encishisiwe yemali. Riksbank inyathelisa njalo ngonyaka umbiko ngokuthi "I-Swedish lwezezimali Market". Kuhlanganisa izibalo izinkokhelo. Kuyo ungafunda imininingwane yezibalo ezifana bangaki ATM terminals credit card kukhona eSweden.
Amabhange yangasese kubuswa big ezine. Nordea, Swedbank, SEB futhi Handelsbanken. Amabhange kufanele ahlukene imali digital ukuthi isetshenziswa kuphela ngaphakathi ebhange uqobo. Amabhange nawo ngezinga elithile komunye nomunye futhi ubambe nomunye izibambiso zingase zibe nezinye izakhiwo zinhlekelele zezimali yingozi. It sekuyinto evamile nezinye abadlali ezifana izinkampani zomshuwalense namaketanga ezinkulu okudayisa atholwe isimo ebhange. Emhlabeni wonke, Sweden ixhunywe iziqondiso yasebhange ngokuthi Basel III. Le ndinganiso kudinga ukuzinza kwezimali emabhange. Beyond le ikhenela kukhona "izingqimba" ezimbili ngokuthi Tier mina Tier II, okuyinto kakhulu siqukethe ubhale izinkinga ezihilelekile. Lena ngempela okuyimfihlakalo, kodwa kuhle ukwazi amaThemu la ukuze ubone labo abangase kamuva ufuna bazicwilise ngaphezulu uhlelo yasebhange.
I Riksbank futhi General Council uye waba njalo ubuhlobo obuseduze ephalamende. I Riksbank inekheli IBhodi Executive. Esikhathini 1600s, eSweden kwadingeka yasebhange yangasese. Riksbank ihlangabezane yibhange emva ucabanga yathengwa isimo. Riksbank wathatha ijamo ngesikhathi Regency nokumosha phambi Karl XIs wokubusa. Esikhathini sethu, amabhange obhekene ukuxhashazwa kanye Riksbank oyibamba umqaphi kuso sonke isibalo sabantu Swedish ngokugwema ngangokunokwenzeka kusukela ekusebenziseni imali.
ke Riksbank kwaba esinakho kokukhipha imali yamaphepha. Esikhathini 90 zokuqala zaqala inqubomgomo yentela ukugxila izinga lokwehla kwamandla emali kunokuba izinga lokushintshisana. I Riksbank imali uphatha rinns kuphela ngesikhathi Riksbank. ithuluzi main Riksbank ukulawula zenzalo ukushintsha kwesilinganiso semalimboleko ukuze kwamanye amabhange ngeke ngethemba ukulandela. Isimo sezimali kungaba ongaziwa ukuze kwesilinganiso semalimboleko alivumi. Uma lokhu kwenzeka futhi lamabhange alandelayo Ongakuthanda engumakhelwane Denmark kuvele funa kwandisa imali.
I Riksbank isebenza ngaso sonke isikhathi, naphezu "ukuma kokungathathi-hlangothi" umsolwa ukusetshenziswa encishisiwe yemali. Riksbank inyathelisa njalo ngonyaka umbiko ngokuthi "I-Swedish lwezezimali Market". Kuhlanganisa izibalo izinkokhelo. Kuyo ungafunda imininingwane yezibalo ezifana bangaki ATM terminals credit card kukhona eSweden. Leli bhange libuye ishicilele omunye umbiko izinkokhelo ngokuthi "I-Swedish izinkokhelo okudayisa emakethe."
Ingxenye enkulu Swedish uhlelo yasebhange siqukethe Rix. I Riksbank sika Rix Sys-tem kuzokwenza izinkokhelo ezinkulu zingenziwa phakathi kwalo lonke usebe ezinkulu. Izinhlobo eziningi izinkokhelo zidlule Rix kungaba imali, ikhadi, i-credit, izibambiso noma zezimali. Kancane okuyimfihlakalo ngokuvamile kuthiwe Rix "luhlala izinkokhelo nge izikweletu kanye Receivables lotawulungisa ezilungisiwe". Kungase kancane eziphikisa Rix idili kube ebhalwe cash digital. Uhlobo ebalulekile izinkokhelo, impesheni kuthiwa imali ku-akhawunti Nezikweletu ngesikhathi Riksbank ngokusebenzisa Rix.
Idlanzana amabhange Swedish kanti ezinye angaphandle unama-akhawunti e Rix - uhlelo. Phakathi angaphandle lubonakale Citibank futhi Morgan Chase. Ezinye amabhange jak Bank futhi Ecobank ayixhunyiwe Rix. Amabhange ukuthi akudingeki Rix akhawunti Usengasebenzisa uhlelo yi-proxy.
Lord of Princess Mint, Dragon Credit Card kanye Black Knights
Kwake kwaba khona inkosazana okuthiwa Mint. Wahlala kulokho wabheka ukuba umcebo omkhulu cash ngesimo zemali banknotes. Kodwa ukuvela khohlanisa. Inqwaba enkulu, kwaba kuphela ebusweni efomini amaphesenti ambalwa lalinabashumayeli imali. Phakathi kwamanzi shiny bekhohliswa izigidi wesikweletu. Phakathi inqwaba, kwaba nje isikhala esikhulu adalwe magic okubi. Isikhala ngokuthi imali digital wathola intela inqwaba bheka inkulu kakhulu kunangendlela empeleni kwakuwukugcwaliseka. Emaphethelweni inqwaba zathuthelekela nemikhovu encane ezimbi ngokuthi abaphathi bebhange. Njengoba nje umuntu wazama ongazihlwitha uhlamvu ngakho hissed futhi yabonisa amazinyo akhe abukhali ezicijile. Kuphela -tonkhe tihlabani takhona ngubani nitinikele ongazihlwitha imali.
Udrako okubi futhi yakhe ye-credit card cashless black knight wafuna ukuba asuse yonke imali abulale inkosazana. Kites okunjalo futhi intela zamanga izindunduma yayikhona emazweni amaningi. Kwasukasukela, emagqumeni intela ninodwa lalinabashumayeli imali. Kodwa ngemva nabathakathi okubi kusukela enkulu ezweni elikude SamUSAmien wadala Dragons esifushane, amakhadi esikweletu igebe ngosizo ukuloya baba yikho kanye lokho kwaba. Wizards eliyaluzayo bezungeza phakathi kwawo wonke amazwe, wabhubhisa intela izitaki ngokugcwalisa kubo nge credit cards futhi kumiswe. Abathathu nabathakathi okubi kakhulu izelamani Mastro, Expresso futhi dinero.
Sivumele sikwazise abanye Knights okubi, njengalokho bona zizungeze amakhadi etafuleni emise amano wokubulala inkosazana Mint futhi asuse imali ngokuphelele kusukela inqwaba. Omunye Knights okuthiwa Riksbank. umsebenzi wakhe ukuqinisekisa ukuthi imali oqhubeka mayelana esilinganayo yize kwisitaki luyakhula futhi likhula.
Ubizwa kahle eyaziwa ezweni Finansien. Asazi ukuthi ukukutshela yini ngaye.
Enye knight okuthiwa FSA. Njengoba nje umuntu kangaka njengoba Whispers zonke izigameko zokubamba inkunzi izwi ndawo ndawo emaphandleni oblong Finansien ephuma lapho, izinsuku eziningana, ememeza out umyalezo ofanayo ezitaladini aze ngokuphelele izwi hoshozela.
キ 0 "Kumelwe ususe amahlelo imali kancane kancane!"
Enye knight sika Ezezimali Association.
キ 1 "ukuphanga!, Ukuphanga!" Ememeza le knight.
Kwenzeka nini lapho othize entshontsha olulodwa imali encane imali endaweni ethile e Finansien.
キ 2 "Uma sisusa imali ngesibonelelo, akukho ukweba!", Uthi ngokuqiniseka.
(Usizo Supervisory Authority ungumsebenzeli ngaphansi Ministry of Finance. It yadalwa ngo-1991 kusukela nokuhlanganiswa nezinye izinhlaka ezimbili. Umsebenzi wayo lomkhulu ukuqapha izibambiso zokuhweba kanye nezinkampani zezimali. I FSA futhi Ijube ukuba 'liqinise isikhundla abathengi emakethe yezimali. "Konke cashless isinqumo ngokuphelele phezu kwamakhanda ethu .)
Omunye umbhangqwana Knights ngokufanayo propsar ku umphakathi cashless Isitolo esidayisa yonke impahla Development kanye Swedish Trade. Lo mqeqeshi owake wapheka uyisisekelo ucwaningo kanye yokugcina inhlangano ibhizinisi. Manje Knights wanquma ukuthi kwakuyokwenzekani kule indaba topsy-turvy. Babemane bahambe ndawonye wamgwaza izinkemba zabo inhliziyo abampofu inkosazana Mint nakuba wakhala futhi wanxusa ukuphila kwakhe. Njengoba ayengakholelwa groveling kanye nokudweba yinkosi dragon Credit card phezu lonke lelo zwe. Udrako kwaqothuka zonke izikweletu nge somlilo yakhe
umoya. The Knights abelethwe off bonke zemali kusukela inqwaba futhi elahliwe inkosazana nalabo echibini.
Babazi kahle ukuthi udrako ngaphandle kwezinkinga ungase ukushwabadela umzimba inkosazana ufile umthamo owodwa. Kodwa kuthiwani uma wayekade ngephutha ngephutha niginge uhlamvu lwemali noma ezimbili ngesikhathi esithile, mhlawumbe wayekade ithungwe izinhlamvu ezimbalwa izingubo njengoba ezokuphepha. Udrako empeleni iguliswa kakhulu zemali. Yingakho Knights wanquma ukuthi alahle inkosazana echibini esikhundleni sokupha ukudla kwakhe ukuze nodrako. Udrako manje ame inqwaba wakhe omkhulu wesikweletu. Uma umuntu kubathinta ezithinta kuye pawing wamane isisulu nge esikhulu okusezingeni eliphezulu credit card ukuze ayiminyanisa kwinani nesisindo. Ukuphela indaba.
Ngokukhuluma out esiphathelene nokususwa yemali futhi simelane cashless e Sverge singakwazi uma hhayi ngokuhamba kwesikhathi ukuvimbela ke okungenani alibale indaba iba engokoqobo.
Uma okubi kakhulu kwenzeka, siyakholwa ukuthi ngisho indaba ezimbi uthola ukuqhubeka lapho konke kuphetha kahle.
Kuthiwani uma amahlelo imali iphele kancane kancane?
Cishe abantu abangaba yizinkulungwane nezimagqabhagqabha ziyasuswa kungase kungabi Ungakanani umehluko ngaphandle kwalabo ababenamakhono, isibonelo, ukuthenga imoto ezibizayo ngokheshi. Kodwa uma ukususwa kokubili -kronors 500 no-200 -sedlarna iqala izinkinga zangempela. Nezingubo nokudla usasebenza kahle, kodwa ngokuya ukuthenga langempela. Kodwa uma umuntu othenga isithuthuthu ngoba 25000 nge izinhlamvu ezingamakhulu kufanele umdayisi ngokubala 250 imali yamaphepha. Ingabe 200 - kronor esethathelwa imali yamaphepha kwenzeke khona, usenguye okungaka ngikujabulele ukubala ukuze 125 kokuchitha okuhlushwa uma ikhasimende kwenzeka ukukhuluma kuye lapho ibala. Ngemva kwesikhathi esithile, waphindela ungenqaba ukwamukela ngemali eningi onayo. Cash etholakala amahlelo ahlukahlukene ngoba kuyindlela ewusizo kunazo zonke ezinye.
Iziphathimandla ukuthatha wonke amathuba sisole ukuphanga ukususa imali esikhundleni nokuxazulula izinkinga ngendlela eyakhayo. Umphakathi Uyalalela hhayi. Olunye ucwaningo lwembula, isibonelo, ukuthi amaphesenti angu-12 kuphela abacabanga ayinkulungwane izingcezu ayidingeki. Eminyakeni embalwa edlule kwaba ukuphanga okukhulu-esakazwa e Jonkoping. Kwakuthinta izinsukwana nje ezimbalwa ngemva kwalokhu, uhlongoza FSA a nezimagqabhagqabha ayizinkulungwane lwaluyonqanyulwa. Ngokuhamba kwesikhathi ingabe-ke futhi asuse nezimagqabhagqabha tags anamakhulu mahlanu nekhulu.
Omunye kungaba umfuziselo phakathi imali kanye nezimoto. Kungaba sengathi ukuba ubalekele ukweba imoto ozovimbela amaloli nezimoto. amabhayisikili kuphela futhi mopeds ezovunyelwa ukuhlala okwakuyoholela ke zivumelana amahlelo encane imali. Okungcono kakhulu, ukuthi ufuna ukubonisa mopeds kanye amabhayisikili zinyamalale kakhulu. Akufanele yini nathi mhlawumbe lizoqeda iyiphi ekhemisi ngoba kwenzeka ukweba imithi ethile futhi ukusetshenziswa kwezidakamizwa? Ukuze njalo basola inkunzi ukuze asuse ukheshi empeleni Umncele kuya kobuntwana okumsulwa.
Lapho 100-Krona nokuncane imali ishiywa, kuba run isimiso imali ngaso sonke. Khona-ke zama kundawo ebhange (uma ungakwazi namanje imali khona) ecela 3,000 kronor esethathelwa e 50 - noma izingcezu ezingu-20. Ucabanga abasebenzi yasebhange ukuphatha wads obukhulu kakhulu cash umshini ngokubala phezulu noma ngesikhathi sibalo okubi kakhulu 150 amanothi nokubala bhukwana kumele kwenzeke ukuhlala ku ebhange? Neze 75 amahlanu izicucu noma. ATM esekelwe Ukuhoxiswa amahlelo banknotes. Uma umuntu ayengathola khona kwakuthiwa bavunyelwe ukushaja 50 no-20 ukugqagqana kungaba wads obukhulu ngokheshi in the imishini. Lonke inani imali emshinini ezithwele ngabe wehlise kanye umthamo imali kungaba olukhudlwana nokuncane ukulawuleka imali uyisa.
It has ngo Kwezinye kwaba iziphakamiso ukuba zemali kuphela kufika ku-50 kroner ukubaluleka ngaphandle amanothi. Lokhu kuyokwehlisa ngaphesheya uzwela ubuhlungu ngenxa ukheshi ukufinyelelwa i nesilinganiso ebanzi. Kwakuzokwenzekani ukuhoxa ebhange futhi Vending umshini? Izimo zethu zihluke kakhulu, kungenzeka ukuthi ama-ke uzokwazi ukuthatha izinhlamvu zemali e umshini imali ke. Coin imiqulu noma mhlawumbe ATM zemali ngisisho ngekhanda njenge-slot machine ubudala noma yini? Asinakukwenza lokho. Inkinga wukuthi wena ungacabangi mayelana ngalesi uhlobo isiphakamiso noma kunalokho ukuthi uwena kuphela imali ukususwa iso.
Kwakusho kahle ukuthi kufanele imali e deal esikhundleni nge ngezinye izinkinga ezihambisana nako. I izitolo may ke Yebo futhi ivolumu kakhulu emikhulu ngokomzimba imali kodwa nge value ezincane ingqikithi. ezokuthutha Cash kuyoba kakhulu ezibizayo nzima ukuphatha. Ngisho kwamanje, ukuhoxiswa imali ebhizinisini ukulahlekelwa for umdayisi. Alilona konke azi. Ngokwami ​​ngicabanga ukuthi zemali zingcono nokuningi practical kuka imali yamaphepha. Kodwa ngaleso sikhathi kuyoba khona zemali azo zonke izinkolo. Ngisho aphakeme.
It is kalula baqonda ukuthi kulesi simo, ngakho-ke, futhi no- ATM. Ngaphezu kwalokho, iqiniso futhi uttagsutomaterna into engeyinhle kakhulu ngenxa yokuthi adinga ikhadi lesikweletu ukuyisebenzisa, futhi imisebenzi zokuhlatshwa ebhange. Ibhizinisi futhi kungenteka tibe futhi mancane amathuba okuthi ufuna ukusebenzisa imali. Ezinye amabhange kuphela siphelelwe ngamandla 500-kronor esethathelwa ekhawunteni ngokusebenzisa avaliwe ephephile uhlelo nokuvikeleka. Kuwukuthatheka ukukholelwa ukuthi lezi amabhange kwezintathu abavuka bazithathe babuyele amanothi amancane futhi.
Yiqiniso ukuthi kungaba ngisho kungenzeka ukubhekana amanothi zemali 20 kuphela ukuthenga ukudla ngesikhathi futhi bathenga izingubo ezishibhile noma kusetshenziswe. Kodwa inkinga zingenakunqobeka kuphakama kanjani ukumbamba amakhulu izikweletu ezincane inyanga ngayinye. Ungacabangi ukuthi amabhange wayeyonikeza lezi. Ikhambi eziphuthuma kakhulu Ngacabanga kuyinto ukuba 'bathenge' uhlamvu lwemali Rolls ukuthenga ezishibhile
okuhlukile ebalulekile. Izinhlamvu zemali yiwona inqwaba ezifana Fairgrounds. kanjani izindawo zokudlala kanye abahwebi ukuze uthole zemali? Indlela okusebenza Angazi kodwa kuyoba ezithakazelisayo ukuhlolisisa kakhudlwana ku.
Kwanele ukuba asuse amahlelo amabili elikhulu imali, kungenzeka sikhathele siyingcuba ukuqoqa imali esele imali yokuphatha ngezandla amabhange kanye mhlawumbe nasezinsukwini imishini. Kulabo abafuna ukugcina imali iza ke ukwenza ukumelana ngangokunokwenzeka ekususweni ihlelo manje. Uma kwenziwa ke cishe ngokuphelele enophephela imali.
Uyini umehluko phakathi namakhadi okuthenga nezinye modernities emlandweni?
Umehluko wukuthi amandla wombuso, izinkampani zezimali kanye nezitolo kancane kancane ukuphoqa ekutfutfukiseni ummango ngokuphelele cashless ngaphandle izinketho. Kuyinto Soze aphele ukuthi ngokuhamba kwesikhathi njengoba umphakathi kufanele abe nelungelo lokuzikhethela phakathi amakhadi esikweletu (kanye nezinye izinto ezingewona ukheshi) noma imali. Ukhetho namanje ngezinga elithile uhlala Kumane kungenxa yokuthi ukumelana ezithile ukuthuthukiswa. Izimoto bebelokhu ngokushesha, sleeker, ephephile, kuwusizo kakhudlwana futhi ashibhile kakhulu phakathi neminyaka. Ngokuhamba kwesikhathi, ngoba abantu abathenge ngokuzenzakalelayo izimoto nokuningi. Kodwa ngokuya wesikweletu, kungcono kakhulu mayelana ophoqelelwe coaxing nge ukwamukelwa ukuphoqwa kancane kancane ukuze uthole abantu ukuzisebenzisa.
Isibonelo umlando wemvelo nakwezobuchwepheshe iyona isintu inzuzo noma ilukuluku asuka imikhawulo yasekuqaleni. Kungaba lisukela abantu Stone Age okwathi födosöket ukufuna ngezizathu entsha bazingele ukuze ukuya emkhathini. Through ukuthuthukiswa impi nezikhali kuyinto engokwemvelo, siqala yebuhlungu kakhulu. Kodwa ukuthuthukiswa kontantlösheten kungekho yemvelo ne. Kuyinto kokubili ezingezona ezemvelo
nemibi. Kuyinto ukuthuthukiswa ezonakele ikakhulu beqhutshwa ukuhaha nokunxanela kabi kwamandla. Iphutha ayisisekelo agumenti cashless wukuthi kontantlöshet achazwe njengomuntu ukukhula okungokwemvelo. Noma ubani ecabanga ukuthi kontantlöshet kuyinto ukukhula okungokwemvelo ukuthi iyothela kwa zibalelwe ezinkulungwaneni zeminyaka ukwenza okungalungile. I izinhlelo kungaba kunalokho afaniswe izilwane soguquko lwegciwane singalawuleka futhi atrophied njengoba biology ongakwenzela noma okufanele ukusinda ngokuhamba kwesikhathi.
Ungakhetha ukuhamba, umjikelezo, ukugibela ibhasi noma iya ngemoto ukusebenza. Nakuba imoto isineminyaka umphakathi eminyakeni cishe sasiyikhulu namashumi, kusenabantu abaningi abafuna ukuba ngaphandle imoto. Kungokufanayo uya for ucingo, kuyithelevishini, emsakazweni, kuyi-Internet, amakhompyutha nokunye. Lowo-ke musa uyeke ukusetshenziswa ama ukukhanya Ohhavini kagesi ngoba lezi ngampela nokuthuthukiswa kwemvelo. Kodwa ngisho Kulokhu, kukhona namanje kungenzeka ukusebenzisa amakhandlela kaphalafini izitofu esikhundleni kulabo abafuna. Kungaba okungenangqondo futhi aziqondakali kanti ezinye ziyethusa oziphethe kabi ukuba wonke umuntu ukuba ashayele. Kodwa ngokuya wesikweletu kuyinto zokukhwabanisa ukuphambana. Akukho okubonisa ukuthi kontantlöshet kuyinto ukuthuthukiswa enempilo futhi zemvelo zobuchwepheshe.
Vecka 10, måndag 8 mars 2021 kl. 20:33